Fambolena zana-kisoa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fambolena zana-kisoa
Bibilava Boligara: ahoana no hampitomboana ny zana-boanjo
Sakafo na Paprika, izay mpikambana ao amin'ny fianakaviana Solanaceae, fantatray amintsika ny doka. Na dia eo aza ny anarana, tsy misy ifandraisany amin'ny voankazo mainty. Ny felam-piraiketam-boankazo dia kolontsaina goavana, izay heverina ho toerana nahaterahan'i Amerika. Io legioma io dia tia ny hafanana sy ny hafanana, saingy ireo sakana ireo dia tsy manakana ny zaridaina any an-toerana tsy hamboly karazan-tsakafo samihafa amin'ny alika amam-bary.
Ahoana no hambolena sy hamboly siramamy
Red chili dia zavamaniry tena mahavariana izay karazam-borona izay teratany Amerikana. Tsy ny olon-drehetra no afaka mankafy ny lovia izay atolotr'io kolontsaina zavamaniry io amin'ny fifantohana be loatra. Fa ny chili dia mahaliana ny mpamboly izay te-hahalala bebe kokoa momba ny fambolena azy.
Tsiambaratelo momba ny fambolena siramamy eo amin'ny varavarankely
Bonsai toy ny kirihitra, matevina sy tsara tarehy amin'ny loko sy ny lokony mahatalanjona, izany no siramamy tsimok'aretina toy ny eo am-baravarankely. Ny akora mampifandray ny pepper rehetra dia antsoina hoe capsicum, noho ny votoatin'ny kapsacin ao amin'ny vatany, izay manome ny tsirony sy ny voany fandrotsahana marevaka maranitra. Ireo voankazo ireo dia azo ampiasaina ho toy ny fanangom-bokatra, hanome azy ireo fanafody ara-pahasalamana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fambolena zana-kisoa